I-Kersbrook Cottage eduze kwaseDerby - I-Airbnb
I-Kersbrook Cottage eduze kwaseDerby
Pioneer, Tasmania, i-Australia
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Katarzyna
U-Katarzyna Ungumbungazi ovelele
Ikotishi lethu elisanda kulungiswa liphakathi nendawo phakathi kweDerby neWeldborough, cishe imizuzu eyishumi ukuya kuzo zombili lezi zindawo. Indawo inokuthula futhi ithule, izungezwe amadlelo anamagquma nokufinyelela okuqondile ehlathini lendabuko elibiyelwe ngokuphelele elinemizila embalwa ye-mtb yohambo olufushane (Kersbrook Stash) nezinye izindawo zokuhamba ngezinyawo. Ilungele imibhangqwana, abagibeli be-MTB futhi ikakhulukazi imindeni ngoba i-Minishredders Babysitting Service iseduze.
Ikotishi linamakamelo okulala amabili, ilungiselelo elilodwa lokugezela (igumbi elilodwa lokulala liphansi kanti elinye lingaphezulu).
Igumbi lokulala elincane elingaphansi linombhede owodwa kanye nenkosi eyodwa. Igumbi lokulala lesibili elisezingeni eliphezulu linemibhede emibili emide eyodwa, engaguqulwa ibe umbhede wenkosi owodwa wezithandani. Kukhona umbhede kasofa owengeziwe egumbini lokuphumula elingaphansi uma niyiqembu noma umndeni wabantu abangaphezu kwabane. Singahlinzeka nge-porta cot noma umatilasi owengeziwe uma sicela.
I-Kersbrook Stash - imizila yethu yasemuva ye-mtb - imnandi kakhulu. Izivakashi zethu zamukelekile ukuthi zizigibele kodwa zidinga ukuba nomshwalense we-mtb futhi zisayine ukuyekwa. Xhumana nathi ukuze uthole ulwazi olwengeziwe.
Le ndawo inemizila ye-MTB esezingeni lomhlaba, imifudlana nemifula enamatshe ayigugu, amachibi ane-trout, ihlathi elinemvula elinesimo sezulu esishisayo elinemizila yokuhamba futhi uma uzizwa ushintsha ulwandle, kukhona amabhishi amahle anesihlabathi esimhlophe namanzi ase-aquamarine atholakala imizuzu engama-45 kuphela.
Siwumndeni wabantu abane abahlala kwamakhelwane futhi sijabulela ukukusiza nganoma yini ongase uyidinge. Siphinde siqhube nenkonzo yasendaweni yokugcina izingane sinabagibeli ekhanda ebizwa ngokuthi iMinishredders. Ningachitha usuku olulodwa olukhethekile - nibabili nje - emikhondweni, futhi nishiye izingane nathi.
Siwumndeni wabantu abane abahlala kwamakhelwane futhi sijabulela ukukusiza nganoma yini ongase uyidinge. Siphinde siqhube nenkonzo yasendaweni yokugcina izingane sinabagibeli ekhan…